आँखाबाट आशु झरीरहन्छ ? यस्ता छन् केहि घरेलु उपाय - ज्ञानविज्ञान
सफा पानीमा एक चम्चा बेकिङ सोडा हालेर तताउनुस् । पानी अलिकति बाँकी रहँदा आँखा धुनुस् । आराम पाउनुहुनेछ ।
कपासको डल्लोलाई दूधमा चोपेर आँखावरिपरि रगड्नुस् । दिनभरि चिसो दूधमा कपासको डल्लो भिजाएर राख्नुस् अनि बेलुका आँखावरिपरि दल्नुस् ।
घिउकुमारीको जेलमा एक चम्चा मह र आधी कप एल्डरबेरी चिया मिसाउनुस् । दिनको दुईचोटि यस मिश्रणले आँखा धुनुस् । तपाईंको समस्या केही समयमै हट्नेछ ।
काँचो आलुको पातलो स्लाइस बनाएर केही समय फ्रिजमा राख्नुस् । त्यसपछि यो चिसो स्लाइसलाई २० मिनेट आँखामाथि राख्नुस् । दुईतीन दिनसम्म यसो गर्दा यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ ।
केमोमाइल वा पेपरमिन्ट चियाका पातहरू केही बेर पानीमा भिजाउनुस् । त्यसपछि तिनलाई अलिअलि गरी आँखा सेकाउनुस् । पानी धेरै तातो चाहिँ हुनुहुँदैन ।
आँखा पोल्दा वा चिलाउँदा पनि पानी बग्न थाल्छ । एक गिलास तातो पानीमा अलिकति नून हालेर आँखा सेक्नुस् । दिनमा चारचोटि यसको उपयोग गर्दा चिलाउने र पोल्ने समस्या हट्छ ।
नरिवलको तेलमा भएका गुणले आँखाको फोहोर सफा गर्छन् । दिनदिनै आँखामुनि र वरिपरि नरिवलको तेलले मालिश गर्नुस् । समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ ।
आँखालाई हातबाट संक्रमणको खतरा बढ्छ । आँखा पोल्दा, पीडा हुँदा वा चिलाउँदा सफा पानीमा कपडा भिजाएर आँखा पखाल्नुस् । यसले सबै किसिमका रोगको जोखिम घटाउँछ ।
१. ब्रेन ट्युमर
आँखाने धमिलो देख्न, आँखाको रङ बदलिँदै जानु साथै टाउको दुख्नु, थकान र कमजोरी ब्रेन ट्युमरको लक्षण हुन सक्छ ।
आँखाको नानीको रङ सेतो हुनु मोतियाविन्दुको लक्षण हुन सक्छ । यो रोगले आँखाको लेन्स बिग्रिने खतरा हुन्छ ।
आँखाको पहेंलोपना बढ्नु कमलपित्त (जण्डिस)को संकेत हो । यसले कलेजो बिगार्छ, रगत पहेंलो हुनुका साथै पाचनशक्ति कमजोर हुन्छ ।
शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढ्दा आँखाको ढकनीको दाग बस्न थाल्छन् । यो मुटुरोगको संकेत हुन सक्छ ।
पूरै आँखा सेतो हुनु एनिमिया वा रगतको कमीको संकेत हुन सक्छ । यसो हुँदा थकान, कमजोरी, सास लिन मुस्किल हुने समस्या हुन्छ ।
आँखा रातो कुनु कन्जंटिभाइटिस नामको रोगको संकेत हुन सक्छ । यसले शरीरमा विभिन्न गिर्खा आउने इन्फेक्सन र एलर्जीजस्ता समस्या हुन्छ ।
आँखा सुन्निनु वा बाहिर उठ्नु थाइराइडको लक्षण हुन सक्छ । यसले आँखामा तनाव पनि गराउन सक्छ ।
Don't Miss it तपाई कुन बार जन्मिनु भयो ? यी बार जन्मिएका मान्छेसँग यस्ता गुण हुन्छ – थाहापाउनुहोस
Up Next तरिका पुर्याएर पानी पिउदा पनि तौल घट्छ जानिराखाैँ